सिङ्गापुरे लाहुरे लिम्बुले जिते गाउँपालिका अध्यक्ष !
May 17, 2022 N88LeaveaComment on सिङ्गापुरे लाहुरे लिम्बुले जिते गाउँपालिका अध्यक्ष !
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्षमा राजन लिम्बु निर्वाचित भएका छन् । सिङ्गापुर पुलिसमा १५ वर्षे सेवापछि पेन्सन पकाएर २०७४ चैतमा नेपाल फर्केका लिम्बु माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारका रुपमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। लिम्बुले एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका निवर्तमान गाउँपालिका प्रमुख सरोज लिम्बुलाई ३ सय ४८ मतअन्तरले पराजित गरेका छन्। गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसकी शान्तिमाया […]
काठमाडौंको शंखरापुरमा राप्रपाले जित्याे मेयर, एमाले कांग्रेस ‘नकआउट’
May 17, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौंको शंखरापुरमा राप्रपाले जित्याे मेयर, एमाले कांग्रेस ‘नकआउट’
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले काठमाडौंको शंखरपुर नगरपालिकाको मेयर जितेको छ । मंगलबार साँझ सकिएको मतगणनामा राप्रपाका रमेश नापित ४७०० मतका साथ निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एकीकृत समाजवादीका लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठले ४२०२ मत ल्याए । उनलाई नेपाली कांग्रेसको समेत समर्थन थियो । नेकपा एमालेका कृष्णलाल बजगाईंले ३६२२ र माओवादी केन्द्रका मधु केसीले २२४४ […]
चितवनमा रेनुकाे रफ्तारले लय समात्दै, ह्वात्तै बढ्याे मतान्तर
May 17, 2022 N88LeaveaComment on चितवनमा रेनुकाे रफ्तारले लय समात्दै, ह्वात्तै बढ्याे मतान्तर
भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ । हालसम्म २१ हजार ८६० मतको गणना भइसकेको छ । अहिलेसम्मको मतगणनामा भरतपुरको मेयरमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेनु दाहालले अग्रता लिइरहेकी छन् । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार रेनुले हालसम्म ७४७१ मत पाएकी छन् । एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले ७०९८ मतसहित उनलाई पछ्याइरहेका छन् । त्यस्तै मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार […]
राप्रपाले मेयरमा खाता खोल्यो
May 17, 2022 N88LeaveaComment on राप्रपाले मेयरमा खाता खोल्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौंमा खाता खोलेको छ । काठमाडौं शंखरापुर नगरपालिकाको ३ वटा वडा सहित मेयरमा राप्रपाले जितेको हो । राप्रपाका मेयरका उम्मेदवार रमेश नापितले जित निकालेका हुन् । उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार एलपी श्रेष्ठ, एमालेका कृष्णलाल बजगाईं र माओवादी केन्द्रका मधु केसीलाई पराजित गरेका छन् । अन्तिम मत परिणाम घोषणा […]
बालेनले बढाए मतान्तर, कुन वडामा कति ?
May 17, 2022 N88LeaveaComment on बालेनले बढाए मतान्तर, कुन वडामा कति ?
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् । महानगरका १, २, ३, ४, ५, ६, २९, ३०, ३१ र ३२ नम्बर वडाका मत गणना भइरहँदा उनले सबै वडामा अग्रता लिएका छन् । ३३२२२ मत गणना हुँदा बालेनले १२८८७ मत पाएका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका एमालेका केशव स्थापितले ६८७८ […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपालेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस् बुधबारकाे राशिफल
May 17, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपालेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस् बुधबारकाे राशिफल
मेष राशि : रोजगारीको प्रयास सफल हुनेछ। व्यापार यात्रा सफल हुनेछ। लगानीबाट सुखद नतिजा मिल्नेछ । भाग्य दयालु रहनेछ। अप्रत्याशित लाभ हुन सक्छ। कुनै ठुलो बाधा हटेर खुशी मिल्नेछ। भाग्यले साथ दिनेछ। पुरानो रोग दोहोरिनेछ । विवादले समस्या निम्त्याउन सक्छ। लेनदेन गर्न हतार नगर्नुहोला। वृष राशि : अप्रत्याशित खर्चहरू आउनेछन्। ऋण लिनुपर्ने हुनसक्छ । आफ्नो […]
गगन थापाकाे ‘इलाकामा बालेनकाे धमाका’ शुरू, यस्ताे छ पछिल्लाे अवस्था
May 17, 2022 N88LeaveaComment on गगन थापाकाे ‘इलाकामा बालेनकाे धमाका’ शुरू, यस्ताे छ पछिल्लाे अवस्था
काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको वडा काठमाडौं महानगरपालिका –३० मा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले अग्रता लिएको छ । काठमाडौं–३० को ६ सय मत गन्दा बालेनले २३३ मत पाएका छन् । काँग्रेस उम्मेदवार सिर्जना सिंहले १०६ मत पाएकी छिन् । महामन्त्री थापाको वडामै काँग्रेस उम्मेदवार सिर्जना १२७ मतले पछाडि परेकी छिन् । यहाँ […]
भरतपुरमा २० हजार ८८ मत गन्दा कसको मत कति ? (पछिल्लाे अपडेट)
May 17, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरमा २० हजार ८८ मत गन्दा कसको मत कति ? (पछिल्लाे अपडेट)
काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेनु दाहालले मतान्तर बढाउँदै लगेकी छन्। पछिल्लो मतगणना अपडेटअनुसर २० हजार ८८ मत गणना गर्दा रेनुले ६ हजार ७ सय ९५ मत ल्याएकी छन् भने एमालेका विजय सुवेदीले ६ हजार ५ सय ४८ मत ल्याएका छन्। रेनु र विजयबीच २ सय ४७ मतान्तरको फरक छ। यस्तै, गठबन्धन […]
काठमाडाैं महानगर अपडेट : वडा नम्बर २९ को मतगणना सुरू, बालेनकै अग्रता (मतसहित)
May 17, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडाैं महानगर अपडेट : वडा नम्बर २९ को मतगणना सुरू, बालेनकै अग्रता (मतसहित)
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले पछिल्लो मतपरिणामअनुसार १२ हजार ५ सय ५३ मत ल्याएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका एमालेका केशव स्थापितले ६७०६ मत प्राप्त गरेका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेकी कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ५९५७ मत पाएकी छन्। वडा नम्बर ३, ४, ५, ६, ३०, ३१ र ३२ को मतगणना भइरहेकोमा अहिले २९ […]
May 17, 2022 N88LeaveaComment on प्रचण्डकाे इलाकामा एमालेले गाड्याे विजयकाे झण्डा, माओवादीको लाल किल्ला गर्लम्मै ढल्यो
चितवन ।नेकपा एमालेले चितवनको माडीमा मेयर पद जितेको छ। माओवादी केन्द्रका ऋषि काफ्लेलाई पराजित गर्दै एमालेकी ताराकाजी कुमारी महतो माडी नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएकी हुन्। एमाले-राप्रपा गठबन्धनकी उम्मेदवार रहेकी महतोले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवार ऋषि काफ्लेलाई २ हजा १७२ मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेकी हुन् । महतोले ९ हजार ९०१ मत ल्याउँदा काफ्लेले ७ हजार ७२९ […]